Maungtintyin: သဘောထားကို ပြောင်းပါ….ဒါပေမယ့် Lifestyle - တော့ မဟုတ်
သဘောထားကို ပြောင်းပါ….ဒါပေမယ့် Lifestyle - တော့ မဟုတ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိုးကွေ့ပြောင်းလဲဖို့- သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အ၀တ်အစားများ- စားနေကျအစားအစာ များ- နေပုံထိုင်ပုံများကို- ပြောင်းလဲရမယ်- ပြီးတော့ သုန်မှုန် မရွှင်ပျတဲ့ - ပြင်းခြောက်ခြောက် စိတ်ကုန်နေတဲ့ ပုံစံကို ခံယူရမယ်- လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ အချို့သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအရာက ရုပ်ဝါဒကို အသားပေးတဲ့ လမ်းခရီးများမှာ ဆက်လက်သွားနေတဲ့ သူများအတွက် ဖျောင်းဖျဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိပါ။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်မြက်တဲ့သူ အချို့ သူတို့ရဲ့အတွေးစိတ်ကူးများကို ချန်လှပ်လို့ အရာရာကို ပြောင်းလဲကြတာ ကကော။ သူတို့ဟာ အကျိုးအမြတ်ကို ကျရှုံးပါတယ်။ မချင့်မရဲအာသာမပြေ ဖြစ်ရပါတယ်။ မျော်လင့်ချက် အဆက်ပြတ်သွားပါတယ်။ “သဘောထား”အပေါ်မှာသာလျင် အာရုံရောက် စူးစိုက်နေတဲ့ ချင့်ချိန်ဆင်ခြင် တတ်သူတစ်ဦးဆိုတာက ရှားရှားပါးပါးပါ။ ဒါဆို အောင်မြင်သူများ ဆိုတာကကော…
အခြေအနေတိုင်း အခိုက်အတံ့တိုင်းမှာ လေးနက်တဲ့ ရွေးရန်အခွင့်အလမ်း သင့်မှာ ရှိတယ် - ဆိုတာပါ။ သင် မပျော်ရွှင်နိုင် မကျေမနပ်ဖြစ်နိုင်သလို- ပျော်ရွှင်နိုင် စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက ပေါ်ပေါက်လာ တဲ့အရာ- အဲဒါက အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ တစ်လောကလုံးမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ။
သင်ဟာ အကောင်းဆုံးအရာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မသက်မသာစရာတွေ ရှိတုန်းပါ။ သင့်မှာ အရူးအမူးမြူးထူးပျော်ရွှင်ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုများ ရှိပြီးမဟုတ်သလို့ ရှိသေးတာလဲ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ကွာဟနေ တဲ့ ခြားနားချက်က သင့်ရဲ့ “သဘောထား”မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀မှာ အရာဝတ္ထုအချို့က လူတိုင်းကို ငြင်းဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့တတွေအားလုံးကို သန်းချီတဲ့ လက်ဆောင်တွေက ကံထူးလို့ မစထားပြီးပါပြီ။ သင်ဟာ သင် ရှိပြီးမဟုတ်တဲ့ အရာအပေါ်မှာ ဆုံချက် ထားရှိမယ်ဆိုလျင်- သင် ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။
သင် ရှိတဲ့အရာအပေါ်မှာ သင် ဆုံမှတ်ထားရှိဖို့ သင် ရွေးချယ်ထားလျင်- သင်ဟာ ဝေမျှဖို့- ဖြည့်ဆည်းဖို့- အလေးထားဖို့- စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေက သင့်ကို ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။
အလွန်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့အရာများဟာ သင် စဉ်းစားတွေးဆတောင် မစဉ်းစားမတွေးဆဘူးတဲ့ လွတ်လပ်မှု မှာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ ချို့ငဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မပြည့်စုံမလုံလောက်စွာ ခံစား နေထိုင်တဲ့ ဘ၀ကို ရှင်သန်နေထိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ သင် လုံးဝ ကျေနပ်နိုင်တဲ့အခါ အလျှံပယ်ပေါများနိုင်တဲ့ အခါ ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဦးတည်ရည်မှန်းတဲ့အရာက အနီရောင် ကာလာဖြစ်တော့ - အဲဒါက အနီရောင်ကိုပဲ ပုံရိပ်ထင် ရောင်ပြန်ဟပ် ပါတယ်။ ပေးတဲ့ အရာကို ရရှိပြီး- ယူတဲ့ အခြားကာလာကိုတော့ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။
ဒ့ါကြောင့် “ငါ ရရှိနိုင်တဲ့ အရာ” မှ - “အခြားအရာများဆီ တန်ဖိုးကို ငါ ဘယ်လို ဖြည့်ရောပေါင်းစွက်နိုင် မလဲ?” ဆီသို့ - သင့်ရဲ့ ဆုံချက်ကို ရွှေ့ပြောင်းရပ်တည်ထားပါ။ ဒီနောက် အောင်မြင်မှုက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင် ချိုးကွေ့လှည့်ကြည့်တဲ့ ပမာဏအတွက်- ကိုယ့်ကျိုးမငဲ့တဲ့ သင်ပဲ ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်။
သင် များစွာချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သင့်မှာ ပဋိပက္ခ ရှိသလား? အဲဒါအတွက် အခြားသူတွေကို အပြစ်တင်သ လား? ဖြစ်နိုင်တာက သင့်ရဲ့ “သဘောထား”နှင့်လိုက်၍ ပြုလုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင် များနှင့် မျော်မှန်းချက်များ ထားရှိသလား? သင့်ရဲ့ ခင်ပွန်း-ဇနီး သားသမီးများအပေါ် တောင်းဆို ချက်တွေ ပြုလုပ်သလား?
ဒီအရာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မဟုတ်ပါ။ တွယ်တာမှု သံယောဇဉ်ပါ။ ကိုယ့်ကျိုးငဲ့ခြင်း စွန်းထင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟာ တွယ်တာမှု သံယောဇဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင်သာလျင် အချစ်မြတ်နိုးဆုံးပါ။ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်ဖို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ - သူတို့ဟာ အချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်လိုအပ်တာကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါတွေက ပဋိပက္ခနဲ့ မဖွင့်ဟသေးတဲ့ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အပြီးသတ် အဆုံးသတ်မှာတော့ သင် သူတို့ကို ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ တွယ်တာတပ်မက်မှု သံယောဇဉ်ဟာ ဆက်ဆံရေးမှာ ယိုယွင်းပျက်ပြားမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတရား ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ပွန်း- ဇနီး သားသမီးများနဲ့ပတ်သက်လို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မြဲမြဲကိုင် ပိုက်ထွေးထားခြင်းက အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝ တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မတည်ဆောက်ပါ။ သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ရိုသေလေးစားမှုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မြဲမြဲကိုင် ပိုက်ထွေးထားခြင်းမှ သွားခွင့်ပြုခြင်းဆီသို့- သူတို့ကို ချည်နှောင် ကန့်သတ်ထားခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ဆီသို့- သင့်ရဲ့ အာဏာစက်လက်ခုပ်အတွင်း (သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါ် ဆုံမှတ်ထားရှိခြင်း) မှ- သူတို့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ကျေနပ်မှုအပေါ် အထောက်အကူပြုခြင်းဆီသို့ - သင့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရွှေ့ယူပါ။ သူတို့ ဖြစ်နေတဲ့အရာအတွက် သူတို့ကို လက်ခံပါ။ သင့်အတွက် သူတို့ လုပ်နိုင်တဲ့အရာ အတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။
တစ်လောကလုံးနှင့် အဲဒီက ကြိုဆိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာတွေဟာ ယာယီအခိုက်အတံ့- ခဏတစ်ဖြုတ် - ဖြတ်သန်းသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နေထိုင်နေစဉ်အတွင်း တစ်လောကလုံးရဲ့ ခဏပန်းယာယီဖြစ်တဲ့ သဘာဝကို နားလည်ပါ။ အဲဒါကို သာယာကြည်နူး မွေ့လျော်ပျော်ရွှင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ဖြတ်ကျော်သွားပါ လိမ့်မယ်- ဆိုတာ အမြဲတမ်း သတိရပါ။ မှန်ကန်တဲ့တန်ဖိုးကို အဲဒါကိုပေးပါ။ အဲဒါအတွက် ယခု သင့်မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချဲ့ကားဟန်လုပ်တဲ့ တန်ဖိုးကိုတော့ မဟုတ်ပါ။
နိစ္စဓူဝ မော်ကွန်းတွင်ရစ်မဲ့ အမြဲတမ်းအတွက် မေးခွန်းထုတ် အဖြေရှာခြင်းကို စတင်ပါ။ ခရီးကိုယ်၌ကကိုယ် ရင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ အဲဒီအခါ သင့်မှာ ရှိတာ မရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ မှန်ကန်တဲ့ ဘယ်ပျော်ရွှင်မှု မျိုးကိုမဆို သင်ဟာ တွေ့ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ “သဘောထား”ကို ပြောင်းလဲပါ။ Lifestyle ကိုတော့ မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဘ၀ဟာ ငြီးငွေ့ဖွယ် အလုပ်ကို တကုပ်ကုပ်လုပ်ရသူမှ ပျော်ရွှင်မြူးထူးသူသို့ ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ မည်ကာမတ္တအဆင့်မှ ထူးကဲပြောင်မြောက်မှုတိုင်အောင် ဆိုပါတော့။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, January 26, 2012
သဘောထားကို ပြောင်းပါ….ဒါပေမယ့် Lifestyle - တော့ မဟ...
အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုကို ဆန်းစစ်ပါ
သင် ရပ်တည်မနေရတော့တဲ့ အခါ
ဆက်လက်၍ သင့်ကိုယ်သင် ပြဋ္ဌာန်းပါ
သူစိမ်းတစ်ရံများနှင့် အဖော်သဟာယများ ဆိုင်ရာ
နေထိုင်ဖို့ Wisdom- ကို ကမ်းလင့်ခြင်း